KOLIKOLY AVO LENTA AO AMIN’NY CES : MISY MANAMBY MILIARA HANALANA KANDIDA IRAY – MyDago.com aime Madagascar
KOLIKOLY AVO LENTA AO AMIN’NY CES : MISY MANAMBY MILIARA HANALANA KANDIDA IRAY
Amin’izao hanoratanay izao dia mandeha be ny resaka kolikoly eo anivon’ny mpikambana ao amin’ny CES hanalana kandidà iray.Misy manamby amin’ny miliara mihitsy ny mpikambana iray ao amin’ny CES. Miandry ny ho tohin’izao resaka izao isika…
Misy làlana iray !
TSY MISY MITSOAKA ADY ETO
Miaramila 5 Kamiao sy 4X4 telo mirongo fitaovam-piadiana no hanenjehana Pasitera iray
Auteur Solo Razafy*Publié le 16 août 2013 16 août 2013 Catégories Politique
3 pensées sur “KOLIKOLY AVO LENTA AO AMIN’NY CES : MISY MANAMBY MILIARA HANALANA KANDIDA IRAY”
Tsy mahagaga izany. Inona moa no tsy mitranga amin’izao fotoana izao ? Teo anelanelan’ny 2009 sy 2013 no nahitantsika ny zava-doza rehetra sy tsy fampiseho masoandro vitan’ireto mpanongam-panjakana ireto.
Excusez-moi si je m’interpose
Ecoutez-moi car je me propose
De faire partie du haut comité
Et d’œuvrer pour la légalité
Je suis beau, intelligent et intègre
J’ai déjà perçu des salaires maigres
variant entre 15 et 22 millions FMG
Je n’oublie pas que j’étais un DG
Comme je suis déjà un affairiste
Je traite même le gaz de schiste
On dit que notre oseille sent l’ail
Tant mieux car il faut que ça aille
Je vous serai donc très reconnaissant
De bien vouloir être si compatissant
Car à part mes deux 4X4 et ma villa
J’ai rien d’autre pour épater Bella
Si notre collaboration se concrétise
Vous verrez que tout sera mainmise
Notre pays regorge tant de richesses
Joliment assez pour assurer nos fesses.
17 août 2013 à 0 h 28 min
Ny harentsika sy ny fandrobana antsika ihany no hanajany antsika e!!
« hamelezany « mantsy e! Tsy mahagaga izany , fa ireo mafia anie no mibaiko izany fa iza moa????
Volamena efa firy KG no taomina isanandro eo ,ny sisa tsy ferana koa misy antony inona aminy moa izay
miliara FMG???? izay no HAMAROTANA ilay fahaizana sy ny TANINDRAZANA ???dia MAMPALAHELO!
Précédent Article précédent : RANJEVA Raymond : Manahy ny fisian’ny mpikarama an’ady
Suivant Article suivant : MOVANSY RAVALOMANANA : NANATITRA MEMOIRE DE DEFENSE TENY AMIN’NY CES